?KI KI ?Exfoclean Product Training Archives - ikigai
Hydra Glow Series
KI KI Reseller Resources
Join KI KI Online Business
Category: ?KI KI ?Exfoclean Product Training
?KI KI ?Exfoclean Product Training
? KI KI Exfoclean (Cocoon Facial Cleanser) ?KI KI ?Exfoclean Product Training
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ ဆိုတာ ဘာလဲ ???
Post author By Aung Phyo
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ ဆိုတာ သဘာဝပိုးဥအိမ်ကို အခြေခံပြီး
Cleanser နဲ့ Exfoliator☘️ ကို ပေါင်းစပ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Facial Exfoliating Cleanser? လေး ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ Cleanser အနေနဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေး၊အဆီ နဲ့ ဖုန် တွေကိုသန့်စင်ပေးပါတယ်။
Exfoclean မှာပါဝင်တဲ့ Cocoon အမျှင်လေးတွေက Physical Exfoliator အနေနဲ့မျက်နှာတွင်ရှိတဲ့ဆဲလ်သေများကိုဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပါတယ်။
AHA ပါဝင်တဲ့အတွက်လည်း Chemical Exfoliator အနေနဲ့မျက်နှာကဆဲလ်သေတွေကိုဖယ်ရှားပြီး အသားရေကိုကြည်လင်ဝင်းပလာစေပါတယ်။
Physical Exfoliating နဲ့ chemical Exfoliating ဆိုတာဘာလဲ ???
သူက တော့ များသောအားဖြင့် scrub လို့သိကြပါတယ် သကြားတို့ ဆားတို့လိုမျိုး ကြမ်းတဲ့အစိစိလေးတွေနဲ့
အသားရေကိုကြည်လင်ဝင်းပအောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာပါ ။ ခီခီရဲ့ Exfoclean လေးကတော့ နူးညံ့တဲ့ ပိုးဥအမျှင်လေးတွေပါဝင်လို့ Physical Scrub အနေနှင့် Exfoliating ကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကွန်ကွန်အမျှင်လေးတွေနဲ့မျက်နှာကိုညင်သာစွာပွတ်တိုက်ပေးပါက မျက်နှာပေါ်ရှိ
ဆဲလ်သေတွေဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင် နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ ဆားဝက်ခြံနားတွေပွတ်တိုက်ပေးပါက ဆားဝက်ခြံတွေလဲ လျော့နည်းစေပါတယ် ✨?✨
သူကတော့ AHA (Glycolic Acid) BHA (Beta Hydroxy Acid) ဆိုပြီးအသိများကြပါတယ် ။လူတိုင်းက Chemical လို့ကြားတာနဲ့ ကြောက်ကြပါတယ် ။ တကယ်တော့ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူး။ မိမိအသားအရေကလိုအပ်တဲ့ percentage အတိုင်း Chemical အနည်းအများပေါ်ပဲ မူတည်တာပါနော်?ဒီ AHA နဲ့ BHA တွေက Gel, Cream, Serum စသဖြင့် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိပြီးတော့ Exfoliator အနေနဲ့အသုံးပြုကြတာပါ။ AHA ကအရေးပြားအပေါ်လွှာကို Resurfacing လုပ်ပေးတော့ နေလောင်တာ၊ အမဲစက်တွေ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေအတွက်သုံးနိုင်ပြီးတော့ BHA ကတော့ ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းထဲထိသန့်စင်ပေးလို့ ဝက်ခြံနဲ့ချွေးပေါက်ဆိုင်ရာအသားအရေပြသနာများအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်✨။ AHA ရော BHA ရောပါဝင်တာမျိုးသုံးပေးနိုင်ရင်ကတော့ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်နော်။ AHA/BHA က Anti-Aging Process အတွက်လည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။
Exfoclean မှာ Pineapple Extract ?ခေါ်နာနတ်သီးမှပြုလုပ်ထားတဲ့ AHA ပါဝင်ပါတယ်။
ခီခီရဲ့ Exfoclean လေးက Physical Exfoliating ရော Chemical Exfoliating ပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ပေးလို့ ကောင်းမွန်တဲ့အသားရေလေး ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ ???
Physical Exfoliator = Cocoon Fibre
Chemical Exfoliator = AHA Pineapple Extract
ဒါကြောင့် တခြားမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေနဲ့မတူပဲ ထူးခြားနေတာပါ ။မျက်နှာသစ်ဆေးမဟုတ်ပါဘူးနော် မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာပါ ဒါကြောင့် နေ့စဥ် အသုံး ပြုလို့ရပါတယ်နော်??
Exfoliating ☘️လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့် Exfoliate လုပ်သင့်တာလဲ ?
Exfoliating☘️ လုပ်တယ်ဆိုတာက မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးတာပါ။ ဆဲလ်သေ တွေဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဖုန်မှုန့်၊ အဆီနဲ့ အညစ်အကြေးတွေက ကင်းစင်သွားပြီး အသားအရေကညီညာလာပြီးအလိုလို ကြည်လင်ဝင်းပလာပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ လိုတာလဲ?
သဘာ၀အလျောက် မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်လေးတွေက နေရောင်ခြည်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်☀️သဘာ၀အလျောက်သေဆုံးသွားတက်ပါတယ်။ဆဲလ်သေတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ အသားအရေကချွေးပေါက်ပိတ်ပြီးမလိုလားအပ်တဲ့ဝက်ခြံဖုတွေ ဖြစ်လာတက်တဲ့အပြင်အရွယ်မတိုင်ခင်
???အဲ့ဒီ ဆဲလ်သေလေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက် Exfoliating☘️ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်
1) ဒါမှသာ အသားအရေလေးက ညီညာပြီး ကြည်လင်ဝင်းပလာစေတဲ့အပြင် တစ်ခြား skin care တွေသုံးတဲ့အခါမှာလဲ Effective ပိုဖြစ်လာစေမှာပါ။
2) Exfoliating က Anti Aging အတွက်Skincare Step 1 ဆိုလဲမမှားပါဘူး။
အခု လက်ရှိ ??Pride of Myanmar Product?? တစ်ခု ဖြစ်တဲ့? Exfoclean Facial Exfoliating Cleanser မှာ ပါတဲ့ Cocoon Fibre ပိုးမျှဉ်နုနုလေးတွေက natural exfoliant အဖြစ်သဘာဝအတိုင်း ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပါတယ် ?
ဒါကြောင့် အသားအရေအတွက် အထူးသင့်တော်ပြီး တခြားမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေနဲ့မတူပဲ ထူးခြားဆန်းသစ်နေတာပါနော်။
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ လေးရဲ့ တစ်ခြားမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေနဲ့မတူတဲ့ ထူးခြားချက် (10) ချက်
(1)သဘာဝပိုးဥအိမ်ကို အခြေခံပြီး Cleanser နဲ့ Exfoliator☘️ ကို ပေါင်းစပ်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Facial Exfoliating Cleanser? လေး ဖြစ်ပါတယ်။
(3)Physical Scrub ဖြစ်တဲ့ ပိုးမျှင်လေးတွေနဲ့ Chemical Scrub ဖြစ်တဲ့ Pineapple Extract (AHA) ?တို့က အသားအရေကို ညင်သာစွာ Exfoliate☘️ လုပ်ပေးလို့ အသားအရေကို ဖြူစင်ဝင်းပလာစေပါတယ်✨✨✨
(4)All Skin Type အသုံးပြုလို့ရပါတယ်???
(5)ဆားဝက်ခြံတွေကို တစ်ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါတယ်???
(6)ခီခီရဲ့ ကွန်ကွန်လေးက?Natural Product? ဖြစ်ပါတယ်
(7)Exfoclean☘️ လေးက Alcohol & Fraganance Free ဖြစ်တာမို့ အဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သဘာဝပိုးဥအိမ် အနံ့သင်းသင်းလေးကို ရစေမှာပါ
(8)SLS ,SLES တို့မပါဝင်ပါ
(9) မျက်နှာသစ်ပြီး အသားအရေ ချောချောလေး ဖြစ်သွားတာကြောင့် သုံးဖူးသူတိုင်းက အရမ်း ကြိုက်ကြပါတယ်✨✨✨
(10) Anti Aging အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ Exfoliating Skincare Step 1 ဖြစ်ပါတယ်။
Made In Myanmar Products?? တွေထဲမှာ Exfoclean လေးက ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဆိုလဲမမှားပါဘူးနော်
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ လေးရဲ့ Main Ingredient တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ…..
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ ထဲမှာပါဝင်တဲ့? Active Skincare Ingredients? တွေက အသားအရေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေပေးလဲဆိုတာ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးမယ်နော်
♦️–ခီခီရဲ့ သဘာဝပိုးဥအိမ်လေးမှာ အသားအရေအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်
♦️?–အမိုင်နိုအက်စစ် (၁၈)မျိုးပါဝင်တာကြောင့်✨ အသားအရေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး ?✨Collagenကိုနှိုးဆော်ပေးပါတယ်။ဒါ့အပြင် မျက်နှာပေါ်ကဆဲလ်သေတွေနဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်⚡️??
♦️–Pineapple Extract? ပါဝင်တာကြောင့် နာနတ်သီးကရတဲ့ AHA က အမဲစက်၊ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေတဲ့ Whitening Effect ပါဝင်ပါတယ်☘️
♦️-Tea Tree Extract? က အသားအရေကို Soothing လုပ်ပေးပါတယ် အဆီကိုလည်းထိန်းညှိပေးပါတယ်။
♦️-Palm Kernel Oil ထန်းအုန်းဆီ က အသားအရေကို စိုပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ Vitamin-E ဓါတ်အပြည့်အဝပါဝင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ တစ်ခါသုံးပြီး နောက်တစ်ခါ ထပ်သုံးချင် ကြတာပေါ့?✨✨✨
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ လေးရဲ့ အသုံးပြုပုံ✅…..
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ လေးကို လက်ညိုး (သို့မဟုတ်)လက်သန်းတွင်စွပ်ပြီး
မျက်နှာကို တစ်မိနစ်ခန့် အမြှုပ်ထွက်သည်အထိ ပွတ်တိုက်ပေးပါ???
ပြီးရင် မျက်နှာကို ရေဖြင့်သန့်စင်စွာဆေးကြောပေးပါ???
မနက်ပိုင်းမှာ? ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ ကို အသုံးပြုပြီးတာနဲ့
Sun Cream(SPF) သို့ ခီခီ Melt on Skin အား မဖြစ်မနေအသုံးပြုပါ။
ညဘက်? မှာ ခီခီရဲ့ Hydra Glow Toner လေးနဲ့ (သို့မဟုတ်) Night Moisturizer မဖြစ်မနေအသုံးပြုပေးရပါမယ် ။
အသုံးပြုပြီးသော Exfoclean☘️ လေးကို ရေနဲ့ သန့်စင်ပြီးခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာမှာ ထားပေးပါနော်။ ဒါမှအသားအရေက ပိုပြီးကျန်းမာနုပျိုစေမှာပါ☘️✨?Exfoclean☘️ လေးက တစ်လုံးကို အနည်းဆုံး (၃) ခေါက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ လေးကို အသားအရေအလိုက် အသုံးပြုပုံနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ ✅…..
Oily Combination Skinသမားတွေကတစ်ရက်၂ကြိမ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
ဝက်ခြံထွက်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ဝကခြံပေါ်လုံးဝဖိပွတ်လို့မရပါဘူးနော်? ၊ ဝက်ခြံရှိတဲ့နေရာတွေ ရှောင်ပြီး
နေ့ဘက်တွင် SPF အသုံးပြုပေးရမည်။
ညတွင် Exfoclean အသုံးပြုပြီး ခီခီ Glow Toner နဲ့အတူ Gel texture ပါတဲ့ Moisutrizer လေးကိုအသုံးပြုပေးပါ။
Dry Skinသမားတွေက Exfoliation ကိုသတိထားပြီးအသုံးပြုရပါမည်။ အသားခြောက်လာမူကို သုံးသပ်ပြီး တစ်ရက်တစ်ကြိမ်( သို့ ) ၃ရက်တစ်ကြိမ် (သို့) တစ်ပတ်တစ်ခါ ချိန်ဆကာအသုံးပြုရပါမည်။
ညတွင် Exfoclean အသုံးပြုပြီး ခီခီ Glow Toner နဲ့အတူ Lotion/Cream texture ပါတဲ့ Moisutrizer လေးကိုအသုံးပြုပေးပါ။ ဒါမှအသားအရေက အရမ်းမခြောက်ပဲ စိုပြေနေမှာပါ??✨
Exfoliation ဖြစ်တဲ့အတွက် Sensitive Skin (အသားပါတဲ့သူတွေ) ချိန်စသုံးပေးပါနော် ? အရမ်းပွတ်တိုက်ခြင်းမပြုရပါ။
?Makeup သုံးနေကျသူတွေကို ပြောချင်တာက ခီခီရဲ့ Exfoclean လေးကို
Makeup Remover အနေနဲ့သုံးလို့မရပါဘူးနော်။ Makeup ဖျက်ဖို့အတွက် Makeup Remover သီးသန့် သုံးပေးပါနော်။ ပြီးမှ Exfoclean လေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးပါ။
ခီခီရဲ့ Exfoclean☘️ လေးသုံးပြီး လှပတဲ့ အသားအရေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ✨
Natural Product☘️ စစ်စစ် ဖြစ်တဲ့ Exfoclean☘️ လေးအကြောင်း
Ki Ki ရဲ့ Exfoclean☘️ ကို ဘာကြောင့် Natural Product ?လို့ပြောလဲ ဆိုရင်
– Exfoclean ☘️ကို သဘာ၀ပိုးဥအိမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားလို့ပါ
ပိုးဥအိမ်မှာ ပါဝင်တဲ့ Fibre ပိုးမျှင်နုနုလေးတွေက
ဆားဝက်ခြံတွေကို လျော့ချပေးပါတယ် ?
– အသားအရေအတွက် ထိခိုက်စေတဲ့ SLS, SLES တွေလဲ လုံး၀မပါ၀င်ပါဘူး?
– Exfoclean☘️ က Alcohol & Fragrance Free ဖြစ်တာမို့
သဘာဝပိုးဥအိမ် အနံ့သင်း သင်းလေးကို ရစေမှာပါ
– Exfoclean? ကို သဘာ၀ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ Fomula အတိုင်း ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ No Chemical Coloring ပါ ???
– Natural Preservative ကိုဘဲ့အသုံးပြုထားပါတယ်
သဘာ၀အတိုင်းပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထာတဲ့ ? Natural Product?လေးဖြစ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့၊ကလေးသူငယ်များ တွေ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် နော် ?
? Exfoclean Facial Exfoliating Cleanser? ကို
ဘယ်လို ထုတ်လုပ်/ထုတ်ပိုးတာလဲ ❓
?? Made In Myanmar?? Product တစ်ခု ဖြစ်တဲ့
?Ki Ki ?ရဲ့? Exfoclean Facial Exfoliating Cleanser? ကို
Ki Ki ရဲ့ Exfoclean☘️ ကို Handmadeအနေနဲ့ထုတ်ပိုးပါတယ်
Ki Ki က Product တစ်ခုကို မထုတ်လုပ်ခင် သေချာ အချိန်ပေးပြီး Testing လုပ်ခဲ့တာပါ
Exfoclean ကို ထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲ Research သေချာလုပ် ပြီးမှ သာ ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်တာပါ နော်
ပထမဦးဆုံး Exfoclean☘️ ဖြစ်လာဖို့ကို ပိုးဥ အိမ် အလုံးလေး တွေအသုံးပြုပါတယ် ?
ပိုးဥအိမ်ဆိုတာက ပိုးထည်တွေ ၊ Luxury Product တွေ ၊High Standard ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုကြတယ် ။ ?ပိုးထည်ဆိုတာကလဲ စျေးတအားကြီးပါတယ် ၊ အဲ့လိုပဲ ပိုးဥလုံးလေးတွေကလဲ စျေးကြီးပါတယ် ။ စက်တွေနဲ့ ထုတ်ချင်တိုင်း ထုတ်လို့မရပါဘူး ?
သဘာဝကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းလေး ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လူတွေကတန်ဖိုးထား ပြီး သုံးလာကြပါတယ် ☘️?
ပိုးဥလုံးလေးတွေကို Customerတွေ မျက်နှာသစ်ရလွယ်ကူအောင် အဲ့အလုံးလေးထဲ လက်စွတ်ပြီး မျက်နှာသစ်လို့ရအောင် ထိပ်လေးတွေဖြတ်ရပါတယ် ✂️
ပြီးတာနဲ့ Collagen နှင့် Protein ပါဝင်သော ပိုးဥလုံးလေးတွေကို Tee Tree Extract? နဲ့ Pineapple Extract စတဲ့ Ingredients တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ ?
ပိုဥလုံးလေးတွေက ပျော့ပျော့လေးနဲ့ အရမ်းနူးညံ့တယ် ၊ ညှစ်လိုက်တာနဲ့ ပိန်သွားရော ပြီးတော့ ဆပ်ပြာနဲ့ ပိုးဥလုံးလေးတွေရောတဲ့အခါ လက်စွတ်လို့ရအောင် အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ နေရာမှာ ဆပ်ပြာတွေ ခြောက်သွားရင် ပိုးဥအိမ် အလုံးထဲမှာ ဆပ်ပြာခဲတွေ ကျန်နေတက်ပါတယ် ?
တစ်လုံးချင်းကိုသေချာ စီစစ်ပြီး လုပ်ရပါတယ် ?
သုံးရတဲ့ အာနိသင်ကောင်းသလို ၊ ထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲ အသေးစိတ်သေချာ လုပ်ရတာပါနော် ?
Ki Ki က Customerတွေသုံးရတာအဆင်ပြေအောင်သေချာလေးထုတ်လုပ်ထားတဲ့
?Luxury Hand Made Product? လေးပါ ၊ ဒါကြောင့် အဖိုးတန်ပိုးဥလေးကိုတစ်ခါလောက် အသုံးပြုသင့်တယ်နော် ?
Ki Ki ရဲ့ Exfoclean ကို ဘာရည်ရွယ် ချက်နဲ့ ထုတ်ခဲ့တာလဲ ❓
ဒါလေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ အရမ်းကောင်းတယ် ?
Ki Ki Founder က??‍? ကွန်ကွန် ပိုးဥအိမ်အလုံးလေးတွေကို
မျက်နှာအသားအရေအတွက် ??♀️Japan?? နိုင်ငံနဲ့ Thai?? နိုင်ငံတွေမှာ အသုံးပြုလာကြတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ?
ဒီလိုနဲ့ Ki Ki Founder က??‍? တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်
သဘာ၀က ရတဲ့ ပိုးဥအလုံးလေးတွေကို အသားအရေအတွက် Product တွေ တစ်မျိူးပြိး တစ်မျိုးထုတ်နေကြပြီ? ငါတို့နိုင်ငံမှာလည်းထုတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီး မြန်မာပြည်မှ Technician တစ်ဦးနဲ့အတူတူချိတ်ဆက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ? Product Of Ki Ki ?Made In Myanmar ??
အနေနဲ့ Exfoclean☘️ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလေးကို? Hand Made ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ခုဆိုရင်☘️ Ki Ki ရဲ့ Exfoclean☘️ က စျေးကွက်မှာ Best Seller Product တစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေပါပြီနော် ? နိုင်ငံခြားသားများကလည်း သဘာ၀ပိုးဥအိမ်ကို Ki Ki ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားမူအမြင့်ဆုံးဆိုတာကို သိရပါတယ်။?
? Cocoon ကို အလှအပအတွက်စတင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံများ…….?
Asia နိုင်ငံတွေကနေ စပြီး အသုံးပြုလာကြတာပါ?
နောက်ပိုင်းမှာတော့ China?? , Japan?? , Korea?? , Thailand ??
ပိုးဥလုံးလေးတွေနဲ့Product အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုလာကြပါတယ် ☘️☘️
အခုဆိုရင်တော့ Ki Ki က မြန်မာနိုင်ငံမှာ သဘာ၀ပိုးဥလုံးလေးတွေနဲ့ Exfoclean မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလေး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ?
ဒီအဖိုးတန်သဘာ၀ပိုးဥလုံးလေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးမို့ အရမ်းကို ဝမ်းသာစရာပါနော် ?
ကဲ….ကဲ… အဖိုးတန်ပိုးဥလေးတွေကို မသုံးရသေးရင် သုံးကြည့်လိုက်နော် ?
© 2022	ikigai